Izithombe ezinhle eziyi-8 zikaPrince Harry noMeghan Markle njengomakoti nomkhwenyana - Indlela yokuphila 2022
Izithombe ezinhle eziyi-8 zikaPrince Harry noMeghan Markle njengomakoti nomkhwenyana
Laba bayathandana ngempela…
INkosana uHarry nengoduso yakhe uMeghan Markle balungiselela umshado. Kuyaziwa ukuthi abathandanayo bazolandela ukunambitheka kwabo ngaphezu kwamasiko obukhosi. Okwamanje, umhlaba wonke ulindele umkhosi onesizotha, ake sikhumbule ezothando kakhulu, ezigcwele uthando, izithombe zalo mbhangqwana.
Ngeshwa, umphakathi ungabuka kuphela iNkosana uHarry noMeghan Mark ngesikhathi semicimbi esemthethweni, kodwa ngisho nezithombe ezithathwe emicimbini enjalo zibonisa ubudlelwano obufudumele bezithandani komunye nomunye.
UHarry noMeghan abanamahloni okukhombisa imizwa komunye nomunye nakulabo ababazungezile.
INkosana uHarry ayikwazi ukusuka kumlobokazi wayo ngisho nesinyathelo esisodwa.
Futhi nasi isithombe sokuqala ngemva kwesimemezelo esisemthethweni sokuthembisana.
Esinye sezithombe ezisemthethweni, ezishicilelwe ngokuhlonipha ukuzibandakanya kukaHarry noMeghan, lapho umbhangqwana ubukeka ujabule ngendlela emangalisayo.
Ongakudla Ngezinwele Ezinhle Nesikhumba: Uhlu Lokuhlola Lochwepheshe Wokudla Okunempilo
Ukuze isikhumba sakho nezinwele zibukeke zizinhle, udinga ukuqinisa umzimba wakho kusuka ngaphakathi nangaphandle. Uma ufuna ukuthuthukisa isimo sezinwele zakho noma ugcine ithoni yayo, imikhiqizo ethile izokusiza ukufeza umgomo wakho oyifunayo
Lawa amehlo: indlela yokwenza izimonyo ezinhle kulabo abagqoka izibuko
Izimonyo zamehlo ezikhethwe kahle ngaphansi kwezibuko zingagcizelela konke lokhu ngokukhanya okuhle nakakhulu. Imithetho nezincomo zokwakheka kwamehlo ngaphansi kwezibuko ezichazwe esihlokweni sethu kuzokusiza ukuthi uhlale uphezulu
Izimpawu eziyi-15 zokuthi uthuthukisa ukuziqhenya nokuthi ungakuqeda kanjani
Enye yezinkanuko eziyisishiyagalombili zesono e-Orthodoxy, esinye sezono eziyisikhombisa ezibulalayo kubuKatolika - konke kumayelana nokuziqhenya. Ukuze uvimbele ukukhukhumala, kubalulekile ukwazi ukuthi kuvelaphi nokuthi ukukubona kanjani
Izitshalo ezi-7 ezinhle zasendlini ezizothuthukisa umoya wasendlini
Izitshalo zasendlini ziyakwazi ukuhlanza umoya wasendlini ezintweni eziyingozi ezikhishwa ifenisha nepulasitiki. Yiziphi izimbali ezikwazi ukuthulisa umoya efulethini - funda kuyodwa